chin – Department of Medical Service
Posted on May 30, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) ပြည်သူ့ဆေးရုံသည် တီးတိန်မြို့ လွယ်ဘွာလ်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ (က) ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၂၅၉၀၄၅၃၁၆ (ခ) Email – zawmyintnaing 911@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (General/ Speciality Units) (၁) ပြင်ပလူနာဌာန (၂) ဖျားနာကုသဆောင် (၃) သားဖွားမီးယပ်ဆောင် (၄) ကလေးကုသဆောင် (၅) ခွဲစိတ်ကုသဆောင် (၆) အရိုးကုသဆောင် (ရ) သွားနှင့်ခံတွင်းဌာန (၈) တီဘီဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄ . ၁) General OPD Timetable စဉ် လူနာဆောင်အမည် ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရက် အချိန် ၁။ ပြင်ပလူနာဌာန နေ့စဉ် နံနက် ၉ :ဝဝ မှ ၁၂... Read More | Share it now!
Posted on May 27, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဆေးရုံအုပ်ကြီးရုံး – ၀၇၀၄၀၀၃၁ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး – ၀၇၀၄၀၀၂၆ ဖက်စ် – ၀၇၀၄၀၀၃၁ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (၁) အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန (၂) ဖျားနာကုသဆောင် (၃) ကလေးကုသဆောင် (၄) ခွဲစိတ်ကုသဆောင် (၅) သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင် (၆) အရိုး၊အကြော၊အဆစ်ကုသဆောင် (၇) ခွဲစိတ်ခန်း (မျက်စိနှင့် နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်များလစ်လပ်နေပါ၍ ကုသမှုဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။) ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (4– 1 ) General O.P.D – 24 hrs (4–2) Specialist O.P.D Physician ... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) – အနောက်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မြို့၊ ချင်းပြည်နယ် ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ – ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဖုန်း ( ၀၉-၄၀၀၀၈၇၄၂၁ ) ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – (၁) အရေးပေါ်နှင့် ပြင်ပလူနာဌာန၊ ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ မင်းတပ်မြို့ (၂) ဖျားနာလူနာကုသဆောင် (၃) ကလေးလူနာကုသဆောင် (၄) ခွဲစိတ်လူနာကုသဆောင် (၅) အရိုးလူနာကုသဆောင် (၆) သားဖွားမီးယပ်လူနာကုသဆောင် (၇) ခွဲစိတ်ခန်း (၈) ဓါတ်မှန်ဌာန (၉) သွားကျန်းမာရေးဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄-၁) General OPD Timetable အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှ အပပုံမှန်တနင်္လာနေ့မှ... Read More | Share it now!